10 -ka Madal ee ugu Wanaagsan ee Hormariyaasha 2022 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn 10 -ka Madal ee ugu Wanaagsan ee Hormariyaasha 2022
Isha Sawirka: shutterstock.com
Sida bilowgaaga farsamada ama meheraddaada oo sii kordheysa oo si joogto ah u sii deyneysa astaamaha cusub, waxaa jira suurtagal ah in goor dhow ama goor dambe aad dareemi doonto baahida loo qabo ballaarinta kooxdaada soo saareyaasha softiweerka.
Ku dhajinta sharraxaadda shaqada waxay ka dhigan tahay inaad mari doonto boqolaal CV -yada aan khuseyn, halka hibada dhabta ahi aysan raadin doonin fursado cusub.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa laga yaabaa inay kugu qaalisan tahay inaad ku kiraysato horumariyaha gudaha mashaariicda waqti-gaaban, lagana yaabo inaadan la kulmin bartilmaameedka shirkadahaaga dhammaadka maalinta.
Marka, mid ka mid ah xalalka ballaarinta soo -saareyaasha softiweerka ayaa ah in la helo oo la shaqaaleeyo horumariyeyaasha madaxa -bannaan ee kale si wax loo qabto waqtiga ku habboon si fudud.
Maqaalkan, waxaan ku qori doonnaa meelaha ugu fiican ee iskood u shaqeysta oo aad ku kireysan karto horumariyeyaasha khadka tooska ah.
Jadwalka dulucda kore waa dulmarka maqaalka.
Waa maxay Platforms Freelance?
Farsamooyinka iskood u shaqeysta waa goob kulan oo ay shaqaaluhu u qalmaan oo xirfad leh meel kasta oo adduunka ah ay shaqo ka heli karaan lacagna ka qaadan karaan.
Intaa waxaa sii dheer, aaladahaani waxay ka caawiyaan shirkadaha inay helaan oo shaqaaleeyaan xirfadlayaal madaxbannaan doorar shaqo ku meel gaar ah ama mashaariic gaar ah.
Nidaamyadani waxay siiyaan suuqyo ganacsi si ay u eegaan astaamaha musharraxiinta xorta ah iyadoo lagu saleynayo xirfadaha, waayo -aragnimada, goobta, ama shuruudaha kale.
Intaas waxaa sii dheer, awoodahani waxay ka caawiyaan shaqsiyaadka iyo shirkadaha cabbirkoodu kala duwan yahay inay ka soo saaraan shaqada mashaariicda u baahan xirfado khaas ah ama shaqaale dheeri ah, iyagoo sii daaya shaqaalaha waqtiga buuxa si ay diiradda u saaraan hawlaha ganacsi ee kale.
Meelaha qaarkood waxay diiradda saaraan soo saarista madax -bannaanida leh xirfado gaar ah, sida qorista, naqshadeynta, ama barnaamijyada, halka kuwa kalena ay suuqyada siiyaan xirfadleyda leh xirfado kala duwan.
Noocyada mareegaha ee shaqaaleysiiya horumariyeyaasha madaxa -bannaan
n hababka shaqaalaynta, tayada kartida, iyo qiimeynta websaytyada soo -saareyaasha madaxa -bannaan waxay u qaybsan yihiin saddex qaybood.
Fahamka kala duwanaanshahan ayaa kaa caawin doona inaad doorato madal ku habboon inaad shaqaaleysiiso horumariyeyaasha madaxa -bannaan ee u haqabtira baahiyahaaga ganacsi. Saddexda qaybood waa:
Shabakadaha amarka ku salaysan
Shabakadaha kartida leh
#1. Shabakadaha Tartanka
Shabakadaha qandaraaska waxay la wadaagaan waxyaalo la mid ah guddiyada shaqada dhaqanka marka ay timaaddo shaqaalaysiinta horumariyeyaasha madaxa -bannaan.
Meelahan, waxaad ku dhejin kartaa shuruud shaqo oo ay weheliso miisaaniyaddaada iyo horumariyeyaasha madaxa -bannaan waxay soo bandhigaan dalab si ay ugu guuleystaan ​​mashruuca.
In kasta oo websaydhyadan ay ku siinayaan mug iyo awood -u -lahaansho (sida soo -saareyaasha madaxa -bannaan u dalbadaan heerar kala duwan oo qiimeyn ah), haddana tayada lama hubo mana sahlana in la garto.
Qaar ka mid ah aaladahaan ma laha habab qiimeyn oo meesha ku jira waxayna si weyn ugu tiirsan yihiin dib u eegista macaamiisha & qiimeynta. Si kastaba ha ahaatee, kuwani waa tilmaamayaasha liita ee xirfadda waxayna u nugul yihiin dhaqan -xumo.
kan akhri, 21 Xirfado Waxbarasho oo Aan La Faa'iidaysan si aad tan u baratoar
#2. Shabakadaha amarka ku salaysan
Mareegahani waxay la mid yihiin mareegaha dalabka laakiin loogu talagalay mashaariicda yaryar.
Shabakadaha madaxa-bannaan ee ku-saleysan amarku waa suuqyada onlaynka ah ee u oggolaanaya xirfadlayaasha iskood u shaqeysta (hal-abuur iyo farsamo labadaba) inay lacag ku kasbadaan iyagoo adeegyadooda u iibinaya 'alaab'.
Waxa diiradda la saarayaa soo bandhigidda xirfado aad u gaar ah, iyo xayeysiinta amarada shaqada ee hal mar ah halkii laga noqon lahaa mashaariic waaweyn.
Sidaa darteed, caqabadda gelitaanka soo -saareyaasha iskood u shaqeysta si ay isu diiwaangeliyaan oo shaqooyinka dhulka uga helaan aaladahaan ayaa ka hooseeya - ka joojinta kartida tayada dhabta ah ee codsashada.
Sidaa darteed, si loo shaqaaleeyo horumariyeyaasha madaxa-bannaan ee mashaariicda muddada-dheer ah, mareegaha ku-saleysan nidaamsan laguma talinayo.
#3. Shabakadaha kartida leh
Horumarinta madaxbanaan ee ugu sarreeya waxay doorbidaan aalado tayo sare leh. Tani waxay u oggolaaneysaa inay keydsadaan waqti haddii kale ay ku bixiyaan raadinta mashaariicda la xiriira.
Intaas waxaa sii dheer, ahmiyadda ugu weyn ee mareegaha tayada leh ee la hubiyay ayaa ah in la dhiso bulsho khibrad leh oo horumariyayaal madax-bannaan oo tayo sare leh kuwaas oo had iyo jeer saf ugu jira guusha mashruuca.
Marka loo eego aragtida macaamiisha, qaabkani waxa uu u ogolaanayaa in ay ku shaqeeyaan karti aad loo soo xulay, iyaga oo ka badbaadinaya wakhtiga & tamarta in ay sameeyaan baadhitaano ballaadhan.
Liiska 10 -ka meelood ee ugu madax -bannaan ee ugu wanaagsan horumarinta
Waa kan liiska 10ka shabakadood ee aad kireysan karto horumariyayaal madax-bannaan
Toptal waa madal iskood u shaqaynaya oo nidaamsan oo ku habboon horumariyaha saxda ah ee macaamiisha baahiyahooda mashruuca.
Si kastaba ha ahaatee, goobtan ma aha mid qof walba loogu talagalay, waa inaad imtixaan qaadataa oo ay ku hubiyaan khubarada Toptal ka hor intaadan shaqada bilaabin.
Nidaamkeeda kala-shaandhaynta ee heerarka kala duwan waxa uu ka kooban yahay dib u eegis kood, dib u eegis faylaleedyo, imtixaam wakhtiga dhabta ah, iyo imtixaan xirfad luqadda Ingiriisiga.
Intaa waxaa dheer, shabakadani waxay leedahay mashaariic heer sare ah, waxay leedahay macmiil la aqoonsan karo, waana mid ka mid ah mareegaha ugu fiican.
Tani sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee iskood u shaqeysta ee horumariyeyaasha. Guru, waxaad ka heli doontaa shaqo wanaagsan oo ku habboon baahiyahaaga xirfad kasta oo aad leedahay.
Madalku wuxuu bixiyaa badbaadinta lacag -bixinta ee SafePay wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad dooratid habka lacag -bixinta ee aad doorbidayso nabad -gelyo maaliyadeed.
Isla markiiba waxaad iska diiwaan gelisaa goobta shaqada ee xorta ah waxaad heli doontaa inaad ka dhex dhex gasho kumanaan shaqo.
Sidoo kale, Guru waxay bixisaa WorkRooms oo wada shaqaynaya oo si fudud ula xiriiraya loo -shaqeeyayaasha.
Haddii aad tahay horumariye madax-bannaan oo cusub markaa Fiverr waa madal aad u fiican oo lagu bilaabo.
Madalku wuxuu dejiyaa xirfadlayaal ka kala socda dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin barnaamij -bixiyeyaal, turjumaanno, hagaajiyayaasha codka, naqshadeeyayaasha, iyo qaar kaloo badan.
Sidoo kale, waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo bandhigto mashaariicdaada iyo xirfadahaaga; xitaa duub fiidiyowga hordhaca ah. Waa bilaash inaad is -qorto, si kastaba ha ahaatee, waxaa lagaa rabaa inaad bixiso 20% komishan lacag -bixin kasta oo aad hesho.
#4. Kor u qaadis
Upwork waa mid ka mid ah suuqa ugu weyn ee xorta ah iyo mid ka mid ah mareegaha ugu fiican ee horumariyayaal madax-bannaan.
Website -kani wuxuu bixiyaa adeegyo aad u kala duwan min naqshad ilaa xisaabin ilaa talo sharci iyo turjumaad. Waxay leeyihiin bandhigyo la yaab leh oo adeegyo ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tartan badan. Barnaamij bixiye karti leh, waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato inaad ka dhex baxdo dadka, gaar ahaan haddii aad ku dallacayso waxaad mudan tahay.
Mareegtan waa meel fiican oo lagu dhiso waayo-aragnimo iyo faylal adag, in kasta oo macaamiisha badankoodu ay yar yihiin ama hadda bilaabayaan.
Freelancer.com waxay kaloo fududeyneysaa inaad la xiriirto macmiilkaaga: sii dhacdooyinka muhiimka ah iyo halbeegyada ku saabsan goorta iyo sida aad shaqada u qaban doonto.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn, waxaa jira baahi badan, in kasta oo ay jiraan tartanno badan oo loogu talagalay shaqooyinka barnaamijyada.
Arc.dev wuxuu si rasmi ah u bilaabay CodementorX, oo ah madal hagitaan oo loogu talagalay soo -saareyaasha. Caadi ahaan, horumariyayaashu waxay caawimaad ka raadin karaan shabakadda si ay u xalliyaan dhibaatooyinka, horumarinta xirfadda, iwm.
Maanta, waxay sii wadaysaa inay sidato summaddii “hormuudka ka-noqoshada talo-siinta ee loogu talagalay soo-saareyaasha” laakiin waxay kaloo soo saartay xal si ay uga caawiso shirkadaha inay shaqaaleeyaan horumariyeyaasha madaxa-bannaan.
Flexiple waa heer sare, teknolojiyad kaliya (horumariyayaal & naqshadeeyayaal) madal khadka tooska ah ka soo baxa kartida ugu fiican ee iskood u shaqeysta oo hore uga soo shaqeeyay shirkadaha tiknoolajiyadda sare sida Amazon, Microsoft, Adobe, iyo kuwo kale.
Mid kasta oo ka mid ah shaqaalaha xorta ah ayaa gacanta ku sita si loo hubiyo aqoontooda shuruudo badan. Tan waxaa ku jira xirfado-xirfadeed, mashruucyo hore, awoodda lagu buuxin karo waqtiyada kama dambaysta ah & shaqada kooxda, iyo isku halaynta guud ka hor inta aan lagu martiqaadin shabakadda.
Intaa waxaa sii dheer, Flexiple waxay bixisaa khibrad shaqaalaysiin oo siman iyada oo bixisa talooyin shaqsiyeed iyo qaabab lacag bixin waqti ku saleysan oo dabacsan.
#8. Hibstaff Talent
Hubstaff Talent wuxuu ku dhow yahay mid cusub wuxuuna siiyaa adeeg gabi ahaanba bilaash ah shirkadaha raadinaya inay shaqaaleeyaan horumariyeyaasha madaxa bannaan iyo sidoo kale wakaaladaha oo keliya.
Iyada oo ahmiyad badan u leh adeegsiga softiweerka si ay ula jaanqaadaan shaqaalaha madaxa -bannaan iyo mashaariicda, ma jiro hannaan turxaan -gacmeed oo lagu ogaanayo tayadooda.
Intaa waxaa dheer, degelkani waa goob suuq ah oo daah-furan oo u oggolaanaysa macaamiisha inay ka dhex baadhaan profile-yada horumariyayaal madax-bannaan oo ay si toos ah ula xiriiraan iyaga.
Sidoo kale akhri tan: 17 -ka Madal ee ugu Fiican ee Bilawga ah 2022 -ka
Tani sidoo kale waa mid ka mid ah aaladaha ugu madax -bannaan ee ugu wanaagsan ee horumariyaasha.
Codementor waa suuq online ah oo ka caawiya macaamiisheeda inay helaan horumariye xirfadle ah (lataliye) caawinta barnaamijyada nool.
Mashruuc-hoosaadkiisa, CodementorX, waa meel aad ku shaqaaleysiin karto cod-bixiyeyaasha madaxa-bannaan ee aad ka soo xulato barkadda latalinta. Habka shaqaalaysiinta wuxuu la mid yahay kan goobaha kale, si cad:
Waxaad sheegtaa shuruudahaaga.
La -taliyaha CodementorX wuu kula soo xiriirayaa wuxuuna kaa caawinayaa inaad hesho taam kaamil ah.
Iyada oo ku saleysan shuruudahaaga, waxaad heleysaa liis kooban oo ah 1-2 horumariye.
Waxaad dib u eegi doontaa astaamaha musharixiinta liisaska la soo xulay oo wareysanaya.
Bilow mashruuc tijaabo leh soo -saaraha aad dooratay.
#10. Codsi Ninjas
Codaynta Ninjas waa mid ka mid ah mareegaha shaqaalaynta ugu fiican ee horumariyayaal madax-bannaan
Ujeeddada Coding Ninjas waxay ahayd in la siiyo horumariyeyaasha adduunka oo dhan inay helaan qaar ka mid ah fursadaha shaqo ee ugu wanaagsan.
Si kastaba ha noqotee, ka mid noqoshada madalku waa xoogaa geedi socod adag. Marka hore, waa inaad buuxisaa arji, siisaa imtixaan luuqadda Ingiriisiga ah, gudbiso wareysi toos ah, dhammaystirtaa mashruuc, haddii wax walba hagaagaan waxaa lagaa aqbalayaa bulshada.
Goobaha suuqyada ee internetka waxay matalaan hab lagu kalsoonaan karo, hufan, oo sahlan si loo helo loona shaqaaleeyo horumariyeyaasha madaxa bannaan. Marka, waxaan aaminsanahay in aaladaha ugu madax -bannaan ee ugu wanaagsan ee horumariyaasha ku taxan maqaalkan ay kaa caawin doonaan inaad hesho horumariyaha ugu fiican ee ka shaqeyn doona mashaariicdaada badan.
Sida Loo Maalgaliyo $ 50k Oo Loo Helo ROI -ga Ugu Fiican | Tusaha Khubarada 2022
Intee in le'eg ayay tahay in Ardayga Kulliyadda lagu soo oogo Tababar 2022 -ka?
Haddii aad hadda heshay shaqo umeerin waqti-dhiman ahaan arday jaamacadeed oo aad la yaabban tahay intee...